दशैंको दक्षिणा : वालबच्चाले कति कमाए ? बैंक खाता खोलेर जम्मा गर्दिनुस् – Banking Khabar
दशैंको दक्षिणा : वालबच्चाले कति कमाए ? बैंक खाता खोलेर जम्मा गर्दिनुस्
बचत गर्ने बानीको विकास गराउन भन्दै अहिले सरकारले गाउँ गाउँमा बैंक पुर्याएको छ । यस्तो बानीको विकासका लागि बालबालिका उमेरदेखि नै सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला र विकसित मुलुकमा बच्चा बेलादेखि नै बचतसम्बन्धी कुरामा सचेत गराइन्छ र नेपालमा पनि त्यसको सुरुवात गर्नु जरुरी छ ।
बैंकहरुले बच्चाहरुकै लागि भनेर विभिन्न बचत खाता योजनाहरु ल्याएका हुन्छन् । जसमा बच्चाहरुको भविष्य सुरक्षित हुने खालका बीमा योजना, आकर्षक व्याजदर जस्ता सुविधाहरु हुन्छन् । अहिले अभिभावकहरु आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि चिन्तित पनि छन् । उनीहरुको रेखदेखदेखि लिएर पढाइसम्मको चिन्तामा उनीहरु खटिरहेका छन् । यसरी बच्चाहरुका लागि बैंक खाता खोलिदिँदा उनीहरुको भविष्यको चिन्ता नै समाप्त गरिदिन्छ ।